Simbi Wiricheya - Wirema Wiricheya
simbi mavhiripu zvakagadzirwa nesimbi zvinoumbwa uye zvinowanzoremerwa mavhiripu iripo. Simbi yaive imwe yezvinhu zvekutanga zvakamboshandiswa kuunganidza mavhiripu. Zvigaro zvesimbi parizvino zvinozivikanwa se tekinoroji yakapera nekuti kune zvimwe zvakawanda mavhiripu kunze uko iyo inoshanda zvakanyanya uye yakasimba kupfuura michina yesimbi.
Macheya esimbi anowanzo kuve asingadhuri nekuda kwekuremerwa kwavo furemu uremu, uye nekuti zvinonetsa kufambisa kana kusundira pane zvinoenderana. Vanhu vanowanzo kusimudzira kubva kusimbi kuenda kualuminium, izvi zvinodaro nekuti macheya ealuminium anorema zvakaderera pane yakajairwa simbi. mavhiripu.
Kana iwe uchifanira kusimudza chigaro chesimbi mumotokari kana kuchichengeta mune compact nzvimbo zuva nezuva, iwe unogona kunzwisisa kuti nei uye sei kungave kuri kurwadziwa kuva nako.
Kurema Unyanzvi uye Simbi Mafuremu
simbi mavhiripu kazhinji inouya nenzira yeruvara dema uye ine zvikamu zvinogadzirwawo nesimbi. Mazuva ano zvakajairika kuti basa rinorema mavhiripu kugadzirwa nesimbi nekuda kwekugara kwavo. Muchiitiko ichi uremu hwachigaro hausi hwekutanga uye huremu hwehuremu hunova chinhu chakakosha mukutonga bariatric wiricheya.
Parizvino kune dzimwe nzira dziri nani dzekuita mavhiripu yakagadzirwa nesimbi. Iko kune aruminiyamu, chazvino chinowanzo shandiswa zvinhu zvechiedza bhuku mavhiripu. Aluminium inobvumira furemu kuti ireme zvishoma nekuda kwerudzi rwezvinhu zvayakagadzirwa kubva. Kune vamwe vashandisi macheya esimbi anomiririra imwe nzira isingadhuri kune aluminium.
Izvi imhaka yekuti macheya esimbi haadhure kugadzira apo aruminiyamu macheya anodhura zvakanyanya. Kazhinji unozoona kuti macheya esimbi ndiwo akadhura mhando mavhiripu unogona kutenga. Asi mutengo wakachipa unoreva zvakare wezasi unhu yemidziyo. Macheya esimbi achiri kungoshandiswa muzvipatara uye nemamwe marudzi ezvipatara. Izvo zvinoshandiswawo mudzimba dzevabati uye mahospital. Izvi zvinodaro nekuti havawanzo kukwidziridzwa uyezve nekuti vakapihwa nehurumende, kana mishonga.
Kune vakwegura, zvakakosha kuti varege vachishandisa chakareruka wiricheya, nekuti mafuremu esimbi anorema anogona kukonzera kushushikana kumigumo yavo uye ivo vakaomarara zvakanyanya kufambisa nemushandisi.